UMG group of companies ၏ လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုဖြစ်သည့် People Origin Co.,ltd. မှ အဓိကဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေသော Valvoline အမှတ်တံဆိပ် စက်ယန္တရားသုံး စက်ဆီ၊ ချောဆီအမျိုးမျိုးနှင့် ရေတိုင်ကီအေးဆီ မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် စက်ပြင်ဆရာများအတွက် ဂုဏ်ပြုညစာ စားပွဲအား ဒေါပုံမြို့နယ်ရှိ Yangon Waterboom တွင် ၂ဝ၁၉ မေလ ၃ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့သည်။
အဆိုပါပွဲတွင် Valvoline ၏ ထုတ်ကုန်အသစ်ဖြစ်သော အမေရိကန် အရည်အသွေးမြင့် ဘရိတ်ဆီ၊ auto ဆီနှင့် ကားအင်ဂျင်ဝိုင်၊ ရေတိုင်ကီအေးဆီ၏အသုံးဝင်ပုံနှင့် ရေတိုင်ကီဖာထေးဆီ၏ စွမ်းဆောင်ရည်တို့ကို People Origin Co.,ltd. မှ general manager ဒေါ်စုစုသွယ်နှင့် supplier ကိုစည်သူကျော် တို့မှ တက်ရောက်လာသော ဧည့်သည်များနှင့် စက်ပြင်ဆရာများကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက် နိုင်ငံကျော်တေးသံရှင်များ၊ အက အဖွဲ့များ၊ ပျော်ရွင်စရာ ဂိမ်းအစီအစဉ်များဖြင့် အောင်မြင်စွာကျင်းပခဲ့သည်။
Valvoline အမှတ်တံဆိပ် စက်ဆီ၊ ချောဆီလုပ်ငန်းသည် ၁၈၆၆ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ စတင်တည်ထောင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သော အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းမော်တော်ယာဉ်သုံး ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ် တစ်ခုဖြစ်သည်။ Valvoline သည် ယခုအခါ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၁,ဝဝဝ ကျော်သို့ ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးပေါင်း ၄ဝဝ ကျော် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိလျက်ရှိသည်။ People Origin Co.,ltd. သည် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Valvoline အမှတ်တံဆိပ် စက်ဆီ၊ ချောဆီအမျိုးမျိုးကို တင်သွင်းကာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးသို့ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိပြီး ယခုအခါ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ရုံးခွဲပေါင်း (၅ဝ) ကျော်နှင့် ပြည်ပနိုင်ငံ (၇) ခုတွင် ရုံးခွဲပေါင်း (၈) ခု ထိဖွင့်လှစ်ထားရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစု တစ်ခုဖြစ်သည်။
ပဥ္စမ အကြိမ်မြောက် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ရက်သတ္တပတ်လှုပ်ရှားမှု 5ᵀᴴ UN Global Road Safety Week ကို ရန်ကုန်မြို့တွင် ကျင်းပ